Weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan dalka Kenya oo u kala gooshayey degaanka Dadab iyo Liboi
May 30, 2012 - Written by
Nairobi:-Waxaa caawa weerar lagu qaaday ciidamo Kenya ah oo marayey deegaanka Liboi ee xadka dalka Kenya waxaana weerarka ku dhaawacmay 4 asakri oo ka tirsan Booliska dalka Kenya waxaana weerarka uu sidoo kale khasaaro gaarsiiyey gaari ay wateen ciidanka Kenya.
Gaari ay wateen ciidamada Kenya ayaa waxaa uu ka yimid Degmada Dadab waxa uuna ku sii jeeday Magaalada Liboi oo ku taala xuduuda dalka Kenya la wadaago dalka Soomaaliya . Weerarkan ayaa waxaa uu ahaa mid gaadmo ah waxaana goobta weerarka uu ka dhacay isaga baxday kooxdii weerarka ku qaaday ciidamada Kenya .
Weerarka caawa ka dhacay Deegaanka u dhexeeya Liboi iyo Dadab ayaa waxaa ku dhaawacmay Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Booliska oo magaciisa lagu sheegay Mr Stanley Kimatu dhaawaciisa ayaa ah mid culus. Dhamaan askartii ka dhaawacantay ciidamada Kenya ayaa waxaa la geeyey Isbitaalka Dadab waxaana isla caawa ka sii qaaday diyaarad Helicopter ah oo geyn doonta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Weerarka caawa lagu qaaday ciidamada Kenya ee u kala gooshayey deegaanka Dadab iyo Liboi ayaa waxaa xaqiijiyey Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Waqooyi Bari Leo Nyongesa isaga oo sheegay in askarta qaarkood uu dhaawacooda uu aad u liito. Waa weerarkii labaad ee caawa ka dhacay dalka Kenya iyada oo saacado ka hor qarax uu ka dhacay magaalada Wajeer qaraxaas oo sababay khasaaro kala duwan.